रासायनिक पिरोह समाधान
विज्ञान परियोजनाहरू र प्रयोगहरू
Piranha Solutions Laboratory Protocol
रासायनिक पिरान्हा समाधान वा पिरान्ह एचर्च एक पतली एसिड वा पेरोक्साइडको आधार हो जुन मुख्यतः गिलास र अन्य सतहहरूबाट कार्बनिक अवशिष्ट हटाउन प्रयोग गरिन्छ। यो एक उपयोगी समाधान हो, तर यसलाई बनाउन, उपयोग गर्न र निवारण गर्न खतरनाक छ, त्यसैले तपाईंलाई यो रासायनिक तयार गर्न आवश्यक छ भने तपाईले सुरू गर्नु अघि सावधान सावधान र निपटान सल्लाह पढ्नुहोस्। यहाँ के तपाईंलाई जान्न आवश्यक छ:
पानासा समाधान कसरी बनाउने
Piranha समाधान को लागि धेरै व्यञ्जनहरु छन्।
3: 1 र 5: 1 अनुपात शायद सबै भन्दा साधारण हो:
3: 1 केंद्रित सल्फरिक एसिड (एच2एसओएस) 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड (जलीय एच2ओ2) समाधान
4: 1 केंद्रित सल्फरिक एसिड 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड समाधानमा
5: 1 केंद्रित सल्फरिक एसिड 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड समाधानमा
7: 1 केंद्रित सल्फरिक एसिड 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड समाधान (कम सामान्य)
आधार पिरान्हा: 3: 1 अमोनियम हाइड्रोक्साइड (एनएच4OH) हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा
एक फोम हुडमा समाधान तयार गर्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ दस्ताने, ल्याबिन कोट, र सुरक्षा चश्मा पहने छन्। हाउजमा भिसा राख्नुहोस् हानिकारक वा क्षतिको जोखिम कम गर्न।
एक Pyrex वा समकक्ष borosilicate ग्लास कन्टेनर प्रयोग गर्नुहोस्। प्लास्टिक कन्टेनर प्रयोग नगर्नुहोस्, किनकि यो समाधान संग प्रतिक्रिया गर्नेछ र अन्तमा असफल हुन्छ। समाधान तयार गर्नु अघि कन्टेनर लाई लेबल गर्नुहोस्।
मिश्रणको लागि प्रयोग गरिएको कन्टेनरलाई सफा गर्नुहोस्। यदि अत्यधिक कार्बनिक पदार्थ हो भने, यो एक जोरदार प्रतिक्रिया हुनसक्छ, सम्भवतः एक भाँडा, ब्रेकजस्ता वा विस्फोटको कारण हुन सक्छ।
धीरेसाथ पेरोक्साइड एसिडमा थप्नुहोस्। एसिडमा परेरक्साइड थप नगर्नुहोस्! प्रतिक्रिया एक्थोरमिक हुनेछ, फोडा हुन सक्छ र कन्टेनरबाट हटाउन सकिन्छ। उबलने वा पर्याप्त जम्मा हुने ग्याँस रिजोल्युसनको रिजोल्युसनले रिजर्भेसनको कारणले गर्दा प्वाइक्साइड बढेको मात्रा बढ्न सक्छ।
पिरानो समाधानको लागि प्रयोग गरिने अर्को तरिका एक सतह माथि सल्फरिक एसिड डाल्न, पेरिअक्साइड समाधानको लागी हो।
प्रतिक्रियाको लागि समय अनुमति पछि, समाधान पानी संग टाढा छ।
प्रत्येक प्रयोगबाट पिरान्हा समाधान ताजा हुनुहोस् किनकि समाधान हटाउनेछ।
समाधान को गतिविधि यसलाई हटाउन को लागी बढेको छ, तर समाधान लागू गर्न को लागी प्रतिक्रिया पछि गर्मी लागू नगर्नुहोस्। यसलाई सुटिङ गर्नु अघि प्रतिक्रिया पछि थोडा समाधान गर्न सल्लाह दिईन्छ।
प्रयोगशाला बेंचमा अनियमित हट पानाह समाधान नछोड्नुहोस्।
पिरानो समाधानलाई एक छापिएको कन्टेनरमा भण्डार नगर्नुहोस्। त्यस विषयमा, पछिल्लो प्रयोग, अवधिको लागि रासायनिक पियानो भण्डार नगर्नुहोस्।
छालाको वा सतहको सम्पर्कमा, पानीको ठूलो मात्रामा तुरुन्त प्रभावित क्षेत्र कुल्ला। कम से कम 15 मिनेट रिइजिङ जारी राख्नुहोस्। उचित आपातकालीन सहायता खोज्नुहोस्।
Inhaling को स्थिति मा, प्रभावित व्यक्ति को ताजा हावा को हटान र आपातकालीन चिकित्सा सहायता खोज्नुहोस। अवरोधको सचेत लक्षणहरू ढिलाइ हुन सक्छ।
संदिग्ध घेराबन्दीको अवस्थामा, तत्काल चिकित्सा ध्यान खोज्नुहोस्।
पिरानो समाधान कसरी प्रयोग गर्ने
सिंक गरिएको गिलास सफा गर्न - पिरान्हा समाधान सिंक गरिएको गिलास वा फ्रिटेटेड गिलास सफा गर्न प्रयोग गरिन्छ किनभने यो गिलासमा पर्दाहरू क्षति गर्दैन (जसको कारण तपाईले बलियो आधार प्रयोग गर्नुहुन्न)। पानी पकाउनु अघि पिरनाहा समाधानमा रात्रि वरिपरि काँचको ढोकालाई तान्नुहोस्।
ग्लासवेयर सफा गर्न - पिरान्हा समाधानले काँचको ढोकामा प्रदूषण हटाउन सक्छ जुन अन्य रसायनहरूले अयोग्य छ। यो महत्वपूर्ण छ कि अत्यधिक कार्बनिक प्रदूषण छैन। रातीको वरिपरि रातो तान्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई राम्ररी कुल्ला पार्नुहोस्।
यो हाइड्रोफिलिक बनाउन ग्लासमा सतह उपचारको रूपमा आवेदन दिनुहोस्। पिरान्हा समाधानले सिलिकनोल समूहहरूको संख्या ग्लास सतहमा बढाउँछ र हाइड्रोलिक्सले सिलिकन डाइअक्साइडलाई बढाउँछ।
सतहहरूबाट अवस्थित हटाउन लागू गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ अवशिष्ट हटाउँदै हुनुहुन्छ र सामग्रीको महत्त्वपूर्ण तह होइन!
पिराहा समाधानको निपटान
पानासा समाधान निषेध गर्न, यो समाधान अक्सिजन ग्याँस जारी गर्न अनुमति दिन पूर्ण रूपमा ठिक गर्न अनुमति दिन्छ। सुनिश्चित गर्नु अघि ग्याँस फैलिएको छ।
ठूलो मात्रामा पानीको साथमा डुबेर पीराना समाधानलाई हटाउनुहोस्। एक आधार थपेर यसलाई तटस्थ नगर्नुहोस्, जस्तै तीव्र अपघटन जारी गर्मी र शुद्ध ओक्सीजन ग्यास। अपवाद जब पिरांहा समाधानको भोल्युम सानो (~ 100 मिलीलीटर) हो। त्यसोभए, पानासालाई पानीमा जोडेर यो मात्राको 10% भन्दा कम छ। पीएच4वा माथिल्लो नभएसम्म सोडियम हाइड्रोक्साइड वा सोडियम कार्बोनेट समाधान जोड्नुहोस्। आधार एसिड समाधानमा थपिएको बेला गर्मी, बुलबुला, र सम्भवतः फोमिंग गर्नु पर्दछ।
सामान्यतया, नाली को तल पतला पियानो समाधान धोने को ठीक छ। तथापि, केहि ठाउँहरू यो जहरको बर्बादको रूपमा व्यवहार गर्न मनपर्छ। निपटानले पनि समाधानको उद्देश्यमा निर्भर गर्दछ, किनकि केही प्रतिक्रियाहरूले कंटेनरमा विषाक्त अवशिष्ट छोड्न सक्दछ। एक हिंसक प्रतिक्रियाको रूपमा कार्बनिक सल्विन्टहरूसँग पिराना समाधानको निषेधित नगर्नुहोस् र विस्फोट हुनेछ।
चाँदी गहने - हेलिकप्टर रसायन परियोजना
कसरी अमोनियम फास्फेट क्रिस्टलको विकास गर्नुहोस्
नकली नियन चिन्ह
तातो बर्फ - हीटिंग पैड रसायन विज्ञान बनाउनुहोस्
क्यान्सर ग्लास इस्कनिक सजावट
कसरी मौलिक विज्ञान मेला परियोजना विचारहरू खोज्नुहोस्
पशु विज्ञान मेला परियोजना विचार
आफ्नो आफ्नै बहुमूल्य खनिज क्रिस्टल नमूना बढाउनुहोस्
पानी कसरी वाइन वा रगतमा घुमाउनुहोस्
कसरी गैर-विषाक्त सुक्खा आइसक्रो वा फोग बनाउने
परिवेश वायु तापमान को समझ को शुरुवात को गाइड
हिरण र अन्य ठूलो गेममा गोली प्रहार
ERIKSSON उपनाम अर्थ र उत्पत्ति
रत्न विश्वविद्यालय प्रवेश तथ्याङ्क
कसरी स्ट्रिङ व्हील स्टड बदल्नुहोस्
राम्रो पट्टि स्ट्रोक विकास गर्न ड्रिल अभ्यास गर्नुहोस्
Thugs of India
Excel मा T-Distribution सँग प्रकार्यहरू
शीर्ष कैलिफोर्निया कलेज र विश्वविद्यालयहरू
पढाईको साधन कौशल - स्क्यानिङ
10 Albertosaurus को बारे मा तथ्य
पियानोमा कम र आधा-घटाइएको7शब्दहरू
अनिवार्य बब मार्ली सीडी
नोकियन हल्क्यापिलिता R2 एसयूवी समीक्षा
एडोल्फ हिटलर भगवानमा: उद्धरण विश्वास र विश्वास व्यक्त
विशेष शिक्षा शिक्षकहरूको लागि सुनको मानक
क्रिस्टल स्टारफिश आभूषण वा सजावट
पशु अधिकार विरुद्धको शीर्ष तर्क
विश्व युद्ध I: चौथो पोइन्टहरू
कन्फर्डड्रेट प्लट न्यू यर्क बर्नको लागि
समानताहरू ईश्वर ईश्वर र अपमानजनक बहसहरू बीच
म्यागिनोट लाइन: द्वितीय विश्वयुद्धमा फ्रान्सको रक्षात्मक विफलता
Boyle's Law and Scuba Diving
अनुपात के हो? परिभाषा र उदाहरणहरू